(Sawirro) Gabar wiil Bajaajle ah ku durtay Irbad oo la qabtay | Puntland
(Sawirro) Gabar wiil Bajaajle ah ku durtay Irbad oo la qabtay
Wiil Bajaajle ah oo ka shaqeeya Magaalada Muqdisho ayaa waxaa cirbad ku durtay gabar la sheegay inay soo raacday rrintan aya ka dhacday isgoyska tarabuunka Ee Magaalada Muqdisho.
Ciidamada amaanka aya gacanta ku dhigay wiilka bajaajlaha ah iyo gabadha la sheegay inay irbada ku durtay xili uu dhex marayaye Muran xoogan.
Macada arrintan waxa ka dambeeya iyo in ay tahay sida loo maleynaayo Ee ah in ay jiraan cirbado lagu duraayo oo Wax loogu geysanaayo Caafimaadkooda; haseyeshee maalmihii ugu dambeyay Dadka reer muqdisho aya waxa ay hadal hayeen dhibaatooyin kala duwan oo la xiriirta Cirbad lagu talaalayo Dadka si ay u qadaan HIV.
ciidanka amaanka ayaa wada Baaritaano ku aadan sababta ay gabadhaan ugu durtay wiilka iyo waxa ku qasbay arintaan.
HIV waxay u taagan tahay fayraska hoos u dhiga difaaca jirka bani’aadamka. HIV wuxuu dhaliyaa AIDS,AIDS wuxuu u taagan yahay Astaanta la qaado ee hoos u dhaca difaaca jirka.
Hadaba hadii arrintan ay jirto waxa ay horseedi kartaa iney si xowli ah ku kororto dhibanayasha xanuunkan.
Waxana looga hortagi karaa in xukun culus laga soo saaro arrintan ama Ciqaab adag la marsiiyo Nolol burburiyaasha Xaasidiinta ah.